चलचित्रमा प्रेमजोडी सौगात र शृष्टि, के होला दुवैलाई फाइदा? – Nepali Entertainment Site
चलचित्रमा प्रेमजोडी सौगात र शृष्टि, के होला दुवैलाई फाइदा?
अभिनेता सौगात मल्लले अभिनयले राम्रो फ्यान फलोअर्स कमाए। केहि समय चलचित्र नगरीमा राम्रो चर्चा बटुलेका सौगातको पछिल्लो समय असफल हुदै गएका छन्। उनको करियरमा केहि असफल हुदै जाँदा उनको चर्चा पछिल्लो समय प्रेम जीवनले हुदै आएको छ। पूर्व मिस नेपाल श्रीष्टि श्रेष्ठ संग उनि केहि बर्षदेखि प्रेममा रहेका छन्। दुवै अभिनयका लागी राम्रो कलाकारको रुपमा गनिन्छन्, तर सफलताको स्वाद दुवैले नचाखेको लामो समय भयो।
पछिल्लो समय प्रेमजोडीलाई लिएर चलचित्र निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ। यसले दर्शकमा चलचित्रप्रति कौतुहलता रहने निर्माण टिमको बुझाई रहेको छ। चलचित्र करियर सुस्ताएको बेला श्रीष्टि र सौगातको जोडी लगातार दुई चलचित्रमा अनुबन्धित भएका छन्। दुवैले पहिलोपटक एकसाथ स्क्रिन शेयर गरेको चलचित्र ‘मासु भात’ को टिजर सार्वजनिक भैसकको छ।
यो पश्चात दुवै ‘पोई पर्यो काले’ मा अनुबन्धित भएका छन्। शिशिर राणाको निर्देशनमा तयार हुने चलचित्रमा यस अगाडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठ अनुबन्धित भैसकेका छन्। चलचित्रमा कसको जोडी को संग बाँधिएको हो त्यो भने निर्माण टिमले खुलाएको छैन। सौगात र श्रीष्टिले एक दिनको अन्तरमा चलचित्र साइन गरेका थिए। अव यो सहकार्य ले श्रीष्टि र सौगातको करियर कता पुर्याउने हो त्यो भने हेर्न बाँकि रहेको छ।
पछिल्लो समय सौगात लगातार चलचित्र साइन गर्ने मुडमा समेत देखिएका छन्। उनले सुवर्ण थापाको ‘राम राम’ चलचित्र पनि साइन गरिसकेका छन्।